Telerehabilitation n'ihi na okwu pathologies na ndị okenye - akpịrị Ọzụzụ
Here nọ ebe a: Home » Artikoli » Ndozi maka ọgwụgwọ ọrịa okwu na ndị okenye
Usoro ọgwụgwọ bụ ubi nke ndị na-agwọ ọrịa na-arụ ọrụ oge niile. Ngwa nke (na-agbasawanye) nke teknụzụ iji gbasaa ọrụ nhazigharị na mpụga ụlọ ọgwụ - ijikọ ọkachamara na onye ọrịa ma ọ bụ ndị ọkachamara dị iche iche iji duzie nyocha na ọgwụgwọ - a na-akpọ tele.
Mgbanwe bụ mpaghara telemedicine nke ngalaba ahụike na-eji na United States iji dozie ọdịiche dị n'etiti usoro nlekọta ahụike okenye dị iche iche. Ngalaba Ahụike United States jiri ọrụ telemedicine mee ihe n'ụzọ gara nke ọma iji kwalite ahụike site na ijikọta ndị ọkachamara ahụike na ọnọdụ dị iche iche n'ọtụtụ nhazi iji nweta ezigbo nsonaazụ ọrịa.
E nwere ụdị telerehabilitation dị iche iche eji eme ihe ma ha gụnyere mmekọrịta na enweghị njikọ, nlebara anya n 'ime ndị ọrịa na iji ngwa iji kwalite ahụike.
Enwere ọtụtụ akwụkwọ iji kwado ojiji nke telerehabilitation na nlekọta nke ndị okenye; Cochrane site na 2013 bụ ụfọdụ ihe atụ nke na-akọ banyere ịdị irè nke mgbatị na ndị nwere ọrịa strok, yana mbipụta 2015 nke Molini na ndị ọrụ ibe ya nke nyochare ngwa nke ọrụ telemedicine maka nsogbu nkwukọrịta na ilo na-egosipụta nsonaazụ dị mma, n'ihi na ihe atụ ndị na-eri-uru ruru nke ghara ịgbanwe na ụba na-etinye n'ọrụ ọnụ na ndidi afọ ojuju.
Iji gbasaa ozi dịnụ, Kristen na Joneen emere na 2019 (ma bipụta ya na 2020) nyocha nyocha nke akwụkwọ sayensị banyere tele-nhazigharị na ọrụ metụtara ọrịa pathologies.
Ajụjụ review gbasara nyocha emere site na 2014 ruo 2019 gbasara ndị okenye nwere aphasia na-adịghị ala ala, nsogbu metụtara ọrịa Parkinson, dysphagia na aphasia na-aga n'ihu. A na-ahọrọ nyocha 31 na ebumnuche ndị a:
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Nsogbu sụgharịrị nke ndị okenye: nkuzi na mmega ahụ
Nyochaa ịdị irè na ịdị irè nke mgbatị ndị okenye n'ime ọrụ maka ndị okenye nwere nkwarụ okwu.
Nyochaa n'ụzọ zuru ezu ọgwụgwọ ndị a na-ahụ anya iji nweta ozi gbasara ndị ọkachamara metụtara, akụrụngwa na ntọala ejiri (dịka ọmụmaatụ, n'ụlọ ma ọ bụ n'etiti n'etiti ụlọ ọgwụ dị iche iche).
N'ime nnyocha a tụlere, ndị na-agwọ ọrịa okwu na-agwa ndị ọrịa okwu site na mkparịta ụka vidiyo na-eji sọftụwia azụmahịa (Skype, Zoom, wdg) na sọftụwia na-eme nchọpụta ọdịnala, ebe ngwaọrụ gụnyere kọmputa, mbadamba na sistemụ teleconferencing zuru oke.
Ihe nchoputa nke nyocha a na-aga n'ihu na-akwado nkwado nke isiokwu a, ya bụ na ekwesịrị iji telerehabilitation na-agwọ nsogbu okwu na onye okenye. Ndị na-ede akwụkwọ na-achọta ihe akaebe nke nrụpụta ọrụ na itinye n'ọrụ nke usoro mmezi, karịsịa na synchronous mode na videoconferencing; ọrụ ndị etinyere n'ụlọ ndị ọrịa egosiputala nsonaazụ ọma nwere ike ịbụ ekele maka ngwa a na gburugburu ebe obibi nkwukọrịta karịa na ụlọ ọgwụ.
Na mmechi, a kọwara onye akọwapụtara dị ka otu ubi na-emepe emepe maka usoro ọgwụgwọ okwu, ma a ka choro oru nyocha siri ike, tinyere ojiji nke omumu omumu iji chịkwaa otutu mgbanwe, iji choputa nchoputa nke oru telerehabilitation. Tụkwasị na nke a, nchọpụta n'ọdịnihu nwere ike ịkọwa ọrụ na mmetụta nke ndị na-ahụ maka ahụike dịpụrụ adịpụ, na-enyere ha aka ịnye ndị ọrịa ha aka ọrụ dị mma ma ọ bụ nke bara uru n'ime ọrụ ndozi okwu.
Ihe omume anyị n'efu (mmekọrịta na akwụkwọ) maka aphasia
Usoro ọgwụgwọ okwu maka ọrịa aphasia na-arịa ọrịa strok: ọ bara uru?
Aphasia na kọmputa iji nweta mmezi. Nchikota nke omumu ihe omuma na akwukwo asusu
Re-gbanye ederede site na iji WhatsApp
Aphasia - CIAT vs M-MAT: Kedu nke ka mma?
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Ogologo batri ule na obere akara (na ndi mmadu)
Weidner, K., & Lowman, J. (2020). Telepractice maka ọrụ ndị okenye na-asụ asụsụ asụsụ: nyocha nhazi. Echiche nke ASHA Otu Mmasị Pụrụ Iche, 5(1), 326-338.
Laver, KE, Adey-Wakeling, Z., Crotty, M., Lannin, NA, George, S., & Sherrington, C. (2020). Ọrụ mgbatị maka ọrịa strok. Ebe nchekwa data Cochrane nke Nyocha usoro, (1).
Regina Molini-Avejonas, D., Rondon-Melo, S., de La Higuera Amato, CA, & Samelli, AG (2015). Nyocha nyocha nke usoro nke telehealth na okwu, asụsụ na sayensị. Akwụkwọ akụkọ telemedicine na telecare, 21(7), 367-376.
aphasia, aphasia na telerehabilitation, ọgwụgwọ okwu na telerehabilitation
Ndozi maka ọgwụgwọ ọrịa okwu na ndị okenye2020-09-132020-09-21http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/09/la-teleriabilitazione-per-le-patologie-del-linguaggio-negli-adulti.jpg200px200px
Nsogbu sụgharịrị nke ndị okenye: nkuzi na mmega ahụAphasia, Asụsụ